ယုစ့် – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ယုစ့် – ၂	10
ယုစ့် – ၂
Posted by ムラカミ on Jun 1, 2015 in Photography | 10 comments
အဖြူခံ ဟုတ်လား ..သဂျီး…
အဖြူခံ ဆိုတော့လည်း အဖြူခံ ပေါ့ဗျား…
အင်္ကျီ အသစ်တထည်ထဲက ကတ်ထူပြားအထူတချပ်ယူပြီး ရိုက်ထားသဗျ…
အစက ခူးပြီး တေဘယ်လ်တော့ပ် လုပ်ပစ်ဦးမလို့ပဲ …
အောင် မိုးသူ says: ရောဂါတွေ ထပ်ပေးပါဦး
ခင်ဇော် says: ဘိုလို ရိုက်လဲ??
Alinsett @ Maung Thura says: .ရေ အစက်ကလေးတွေများ… ဖန်သားပြင်ထဲက…လိမ့်ဆင်း စိုရွှဲ ကျလာမလိုလိုထင်ရ
Wow says: ဟယ် အဖြူခံလဲ လှသတော့
Ma Ma says: ယုဇနကို အဖြူခံပြီး အပွင့်ပေါ်အောင် ဘယ်လိုများ ရိုက်ပါလိမ့်။
နောက်ခံအဖြူက အနီးအဝေးကြောင့်လား အလင်းအမှောင်ကြောင့်လား အရောင်ကွဲသွားပြီး ယုဇနရဲ့ အဖြူရောင်ကပေါ်ပြီး လှသွားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ယု့စ် ဆိုလို့ ဟို ယု့စ်လားလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: အဖြူခံပေ မယ့် အပွင့်ေါ်အောင်ရိုက်နိုင်တာ ပညာဘဲပေါ့
မြစပဲရိုး says: ဝုတ်မယ်မထင်ပါဘူး ဒေါ်လေးရာ။
တကယ်တော့ အဖြူရောင်အပွင့် နောက်မှာ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေက ရှိနေတော့ သူ့နောက်က အဖြူထည့်ရိုက်တာ ခက်တာလိုက်လို့။
မယုံရင် အစိမ်းနောက်ခံထား ရိုက်ခိုင်းကြည့်ပါလား။
ဘယ်လောက် ပညာစွမ်းမလဲလို့။ :-)))))
အရွက် တွေပျောက်ပြီး ပန်းချည်း ငုံးတိတိ ဖြစ်နေမလား? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: ယုစ့် ဆိုလို့ ယု လားလို့ မကြည့်ဖြစ်…
တစ်ပုံရွေးဆို3ကိုရွေးပါမယ်…
Mike says: .ဂွတ်ရှော့